तेस्रो बिहे नगर भन्दै आउँछन्, के मेरो बिहे खर्च उनीहरुले तिर्नुपर्ने हो ? :श्वेता तिवारी - Akhabarpatra
‘कसौटी जिन्दगीकी’बाट प्रेरणाको भूमिकामा चर्चा कमाएकी टेलिभिजन अभिनेत्री श्वेता तिवारीले आफ्ना दुई असफल वैवाहिक सम्बन्धका तीता अनुभव साटेकी छन्।
‘तर जब मैले २७ वर्षको उमेरमा पहिलो श्रीमान छोडेँ, बच्चाका अगाडि आमा-बुवाले दिनहुँ झगडा गर्नु वा उनीहरुले बुवालाई मातेको देख्नु एक्लो आमा वा बुबासँग हुर्काउनु भन्दा नराम्रो कुरा हो,’ उनले भनिन्।
श्वेताका अनुसार दुई पटक सम्बन्ध असफल भइसकेकोले मानिसहरु उनलाई सल्लाह दिन आउँछन् र भन्छन्, ‘तेस्रो बिहे नगर।’
उनको प्रश्न छ, ‘म उनीहरूलाई सोध्छु, को हुन उनीहरु? के मेरो बिहे खर्च उनीहरुले तिर्नुपर्ने हो? यो मेरो निर्णय हो। यो मेरो जीवन हो।’